Phupha malunga neLakho Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Imifuziselo yamabhinqa yenkukhu yethu yasekhaya ibizwa ngokuba zizikhukukazi. Ukuthetha ngokungqongqo, nangona kunjalo, zonke iinkukhu, iinciniba kunye nee-bustard zibizwa ngokuba zizikhukukazi. Inkukhu yinxalenye yokutya kwethu, isinika amaqanda nenyama.
Isikhukukazi sizalela iqanda elinye okanye amabini ngosuku. Le ntaka ayikwazi ukubhabhela kude kakhulu, kodwa iyimbaleki ekhawulezayo nezingisayo. Iinkuku zikrwela kakhulu ukutya okweenkozo okanye iintshulube, kwaye ziyazithanda iibhafu zothuli abazisebenzisela ukukhathalela iintsiba zazo. Zithathwa njengezingenakuphumla kwaye zingenangqondo ngokukhethekileyo. Inkathalo engumzekeliso sisikhukukazi esikhathalele kwaye sikhulise amantshontsho aso.
Ukuba uphupha isikhukukazi, ungothuka xa isilwanyana sasefama sihamba ngephupha elo. Kukho okuninzi ukubona. Ngaba inkukhu iyabaleka, iyakrwempa okanye iyahleka? Ngaba ukhona umhlambi wamantshontsho kunye nawe? Okanye ngaba uhlala ngomonde kwi-clutch yakho? Ngaba wayenokubona i-turkey okanye i-turkey? Yonke le miba inentsingiselo ethile ekutolikeni kwamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «hen» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «hen» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «hen» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «hen» - ukutolikwa ngokubanzi
Isikhukukazi sifanekisela ithamsanqa ekutolikweni kwamaphupha. Ngokukodwa ukuba isimboli yamaphupha sisikhukhukazi esibelekisayo okanye esizalela amaqanda amaninzi, ikwathetha oko imvisiswano yosapho y mpu melelo.
Inkukhu ebonakala ephupheni inamantshontsho amaninzi, mhlawumbi ikwanamaqokobhe amaqanda, yathathelwa ingqalelo kumaxesha amandulo njengophawu lokonwaba ebuntwaneni. Kutoliko oluthandwayo lwamaphupha, indima ebalulekileyo idlalwe yinto eyenziwa sisikhukhukazi ephupheni nokuba kwenzeka ntoni kuso.
Ukuba iphupha libona isikhukukazi esikhulu kwaye sihle, isilwanyana sibonisa ulonwabo eluthandweni kwaye sibhengeza ukudibana kosapho. Ukuba inkukhu ixheliwe ephupheni, iphupha kufuneka likulumkele ukuzenzakalisa. Ukuba uyatya isikhukukazi okanye ukuba uhleli esidlekeni, uphawu lwephupha ekuchazeni iphupha kuthetha ukuchuma.
Ukuba ubona isikhukukazi sizalela amaqanda ephupheni, yima ngeenyawo izinto ezintle ngenxa ye. Oku kunokuba kukukhula kosapho, ukufumana izinto eziphathekayo, okanye impumelelo kwishishini nakwimigangatho yobungcali. Intsingiselo echanekileyo yesimboli yephupha ixhomekeke kwinto iphupha eliziva ngathi lifika nje.
Ukuba ubona isikhukukazi ephupheni ngelixa sizala okanye sinamantshontsho amaninzi, oko kuthetha ukutolikwa kwephupha. esperanza y Ndinqwenela ukugcwala. Ukuba isikhukhukazi sigxothwa ngumqhagi, isimboli yephupha icebisa ukungabathembi abo babizwa ngokuba ngabahlobo. Isikhukukazi esibambayo silumkisa eli phupha malunga neziphumo ezibi zokungazithembi.
Uphawu lwephupha «hen» - ukutolikwa kwengqondo
Umfuziselo wephupha u "hen" uquka kwelinye icala icala lephupha, kuba sisilwanyana esiqwalaseleyo nesimameleyo. Kwelinye icala, kubandakanya ukutolikwa kwamaphupha. Iimpawu zoomama njengasekhaya kunye nokhathalelo. Isikhukukazi sisibonakaliso sokhuselo oluvela kwinkukhu yenkukhu, kunye nokuqonda okungaziwayo kwephupha malunga nalo: angaziva ekhuselekile kakhulu kwaye esezandleni ezilungileyo okanye uyinqwenela kuba engenabushushu bendlwane.
Nangona kunjalo, inkukhu inokuba luphawu olusuka kwi-subconscious ephupheni ukuba iphupha liziva likhuselwe ngumntu. Oku kunokuba sisibini okwangoku, kodwa ikwangumzali oyinike ebuntwaneni. ukhuseleko olugqithisileyo inciphile.
Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha luhlala luphawu lolawulo lwabasetyhini. Kuba isikhukukazi sikwabonisa ukuzala nokuzala, zombini umnqweno wokuba ngumama kunye noloyiko lwayo kunokubonakaliswa ephupheni.
Uphawu lwephupha «hen» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha "hen" lithetha Ukuchuma kunye nesiqalo esitshakuba ibeka iqanda, uphawu lwemvelaphi yobomi. Mhlawumbi ukuphupha kufuneka kuzikhulule kwingxinano yengqondo kwaye kuqalise ukuzalwa kwakhona ngokomoya.
Uzipho lweentaka oluqhelekileyo, kutoliko lwamaphupha, luphawu lwamandla okanye iipropathi ezifihlakeleyo zephupha, ekufuneka zibonwe. Ngapha koko, kwiinkcubeko ezininzi inkuku sisilwanyana ekubingelelwa ngaso. Njengophawu lweli phupha, ufuna ukubiza iphupha ukuba lishiye indima yexhoba kwaye libumbe ubomi balo obugqithisileyo.